Uzicoca njani ii-AirPods zakho, ii-AirPods Pro, ii-AirPods Max kunye nee-EarPods | Ndisuka kuMac
Kwenzeka kuthi sonke. Sikhulule ii-AirPods zethu ezithandekayo kunye nezibizayo okokuqala, ngaloo nto kwithagethi yenyukliya ii-headphones ze-Apple ezinemifanekiso, sizivavanyile, sibona ukuba ziphulaphula kakuhle, ukuba zingena ngokugqibeleleyo ezindlebeni zethu (okanye akunjalo) kwaye ziye zaxabisa oko sisanda kuzihlawula.
Naxa uthe wabakhupha endlebeni yakho, ukuba ubabeke etyaleni labo: Sikhwankqiso! ibala ezindlebeni! Ujonge ngasekhohlo nasekunene xa umntu ekubona, uzicoca ngokukhawuleza ngeminwe yakho, kwaye uzibeke kude, ucinga okomzuzwana ukuba nguwe kuphela umntu emhlabeni wonke one-wax ezindlebeni zakhe ...
Bonke abantu, ukuya kwinqanaba elikhulu okanye elincinci, sikhupha iwax ezindlebeni zethu. Kuyimfuneko ukubakhusela. Le wax inemichiza ekhethekileyo elwa nosulelo olunokonakalisa ulusu ngaphakathi kumjelo wendlebe. Isebenza njengekhaka elikhuselayo phakathi kwelizwe langaphandle kunye ne-eardrum.
Kwaye kulapho senza ngokuchasene neNdalo, kwaye sibeka into engaqhelekanga, eyenziwe ngeplastiki emhlophe, kwimingxuma yeendlebe zethu ixesha elide: AirPods. Ewe, into engenakuphepheka iyenzeka. Nokuba ucoca ngokucokisekileyo ngaphakathi kweendlebe zakho ngalo lonke ixesha ufuna ukusebenzisa ii-headphones zakho, ekungekho mntu uzenzayo, okanye ngokuqinisekileyo uya kuzifaka ngewax.
Kwaye ukuba iintsuku zihamba, kwaye ngokungxama, awukhumbuli okanye awunalo ixesha lokuzicoca rhoqo xa uzisusa ezindlebeni zakho, ekugqibeleni uya kuyeka ukumamela umculo owuthandayo ngokucacileyo. ngosuku lokuqala. Ke asikuko ukuba ungeva, ungonakalisi; koko usuka ube sisithulu lixesha lokuzicoca. Makhe sibone indlela yokwenza ngaphandle kokubenzakalise.
Ukuxhathisa okusemthethweni kwamanzi kwii-AirPods kunye ne-AirPods Pro kukubila kunye nokutshiza kuphela. Oko uyazi.
1 Yintoni iApple ethi Ungayenza
2 Kwaye ungayenzi
3 Iingcebiso zethu
4 Coca kwakhona i-case yokutshaja
Yintoni iApple ethi Ungayenza
I-Apple inalo kwiwebhusayithi yayo a iphepha lenkxaso apho icebisa into ekufuneka uyenzile kwaye ungayenzi xa ucoca ii-headphones zakho. Siza kwenza isishwankathelo sakho izikhombisi.
Kwiplastiki emhlophe yeqokobhe le-AirPods yangaphakathi, kunye netyala layo lokutshaja, ungasebenzisa ukosula okufakwe ngaphakathi. i-ethyl yotywala ukuya kwi-75%.
Ukuba akunjalo, ngelaphu elimanziswe ngaphakathi amanzi, uze womise ngelinye ilaphu elingenalusini.
Kwi-AirPods Max, sebenzisa ilaphu elimanziswe kancinci ngamanzi abalekayo kwaye lome ngelaphu elithambileyo, elomileyo, elingena-lint.
Ukucoca iipads zendlebe Ii-AirPods eziphezulu, zisuse kwii-headphones kwaye unciphise ilaphu kwisisombululo se-5 ml ye-detergent ye-liquid yokuhlamba impahla kwiglasi yamanzi. Zihlikihle kwaye zomise kakuhle.
Coca i-microphone kunye ne-speaker grilles nge-cotton swab yomile.
Susa inkunkuma yesinxibelelanisi Umbane ngebrashi ecocekileyo, eyomileyo, ethambileyo.
Thatha iirubha kwi-AirPods Pro kwaye uziqhube phantsi kwempompo. Kuphela ngamanzi. Zomise kakuhle phambi kokuba uzinxibe kwakhona.
Musa ukusebenzisa izosuli zotywala ukucoca iigridi ukusuka kwizithethi ze-AirPods.
Musa ukusebenzisa iimveliso eziqulathe iblitshi okanye ihydrogen peroxide.
Kuphephe ukumanzisa izithuba. Ukuba akukho lulwelo lungena ngabo.
Sukuntywilisela ii-AirPods okanye ii-AirPods Pro phantsi kwamanzi.
Musa ukubeka i-AirPods Max phantsi kwempompo.
Musa ukuzama ukuzisebenzisa de zome ngokupheleleyo.
Musa ukubeka nantoni na kwizibuko zokulayisha.
Ungaze ucinge ngokubeka ii-AirPods zakho phantsi kwamanzi. Shiya olu mvavanyo kwiYouTubers ephambeneyo.
Yonke le ithiyori i-Apple esicacisela yona ilunge kakhulu ukuyazi, ukuze singenzi naziphi na iimpazamo, kodwa siza kuchaza ngendlela esebenzayo yokugcina ii-headphones zethu ze-Apple zikwimeko egqibeleleyo.
Ku Ityala Umphandle omhlophe wee-AirPods, ungasebenzisa ilaphu elomileyo, okanye umanziswe kancinci ngamanzi okanye utywala. Zihlikihle kwaye zomise ngokukhawuleza, ukuphepha ukumanzisa i-speaker grill, ekubeni ukuba wenza njalo kwaye i-wax iqokelele, inokwenza intlama kwaye iqokelele kwimingxuma emincinci kwi-grill, ngaloo ndlela ibe yinkathazo.
Indlela efanelekileyo yokucoca i-grill ethethiweyo kukuhlala uyenza kuyo yomile. Qhoboshela ibhrashi yamazinyo eyomileyo kwaye ukhuhle irack. Oku kuya kwenza ukuba iincinci ezincinci ze-wax ezomileyo ziphume, kwaye uya kuzishiya zicocekile. Ukuba uyifumana imanzi, uya kuba nengxaki. Ungasebenzisa kwakhona "Bluetac" putty eqhelekileyo. Yonke i-wax eyomileyo iya kubambelela kuyo, kwaye igridi iya kuhlambuluka kakhulu.
Ku gummies yee-AirPods Pro, zisuse kwaye uziqhube phantsi kwempompo, ngamanzi nje. Zomise kakuhle kakhulu, kwaye uzibuyisele. Kwaye ulungile. Kwi-AirPods Max pads zendlebe, musa ukudlala kwaye ulandele imiyalelo ka-Apple. Zihlukanise kwaye uzisule ngelaphu elifumileyo kwiglasi yamanzi ngetispuni yesepha elulwelo yokuhlamba impahla. Zomise kakuhle kakhulu kwaye yiloo nto.
Nantsi into omawuyisebenzise ukucoca ii-AirPods zakho: umqhaphu weswab kunye nebrashi yamazinyo.
Coca kwakhona i-case yokutshaja
El ityala lokutshaja ifanelwe kukhankanywa ngokwahlukileyo. Musa ukuyimanzisa nantoni na esehlabathini, ngakumbi ukuthintela ukuba ulwelo lungene kuyo. Okona kuninzi, ngaphandle, njengoko wenze ngeplastiki yee-AirPods. Kwaye ngaphakathi, yihlambulule nge-cotton swab.
Lumka kakhulu into oyifaka emingxunyeni apho ii-AirPods zigcinwe khona. Ngasemva kukho izihlanganisi ezimbini abanoxanduva lokudlulisa umjelo wokutshaja kwiibhetri ze-AirPods. Njengoko uya kuqonda, kufuneka bahlale becocekile, ukwenzela ukuba badibanise kakuhle, ngaphandle koko, abanakuhlawulisa. Ukuba uzibona zingcolile, sebenzisa i-toothpick yeplanga okanye i-cotton swab eyomileyo.
Enye inqaku elibalulekileyo lizibuko Umbane. Ukuba uhlala uphethe ingxowa yokutshaja epokothweni yakho, i-lint inokuqokelela ngaphakathi kwezibuko lempahla yakho. Ayibuhlungu into yokuba amaxesha ngamaxesha ubeke i-toothpick yomthi ukususa uthe fluff ngononophelo kakhulu. Ungaze unxibe nantoni na eyintsimbi.
Ngezi ngcebiso zincinci ungazigcina ii-AirPods zakho zikwimeko epheleleyo yemagazini. Kubonakala kungakholeleki ukuba zingcola njani ukuba uzisebenzisa rhoqo, mhlawumbi ngenxa ye-wax yendlebe, okanye ngenxa fluff yempahla ezipokothweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Uzicoca njani ii-AirPods zakho, ii-AirPods Pro, ii-AirPods Max kunye nee-EarPods
IMacOS 12.2 iya kubandakanya isicelo esitsha soMculo seApple